Inkwenkwezi yelitye elimnyama intsingiselo kunye neepropathi- ividiyo
Inkwenkwezi yelitye elimnyama intsingiselo kunye neepropathi.
Thenga ilitye lenyanga elimnyama lendalo kwivenkile yethu
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga yi-sodium potassium aluminium kunye nefomula yamachiza (Na, K) AlSi3O8 kwaye ikwiqela le-feldspar.
Sisebenzise ilitye le-jewelry kwilitye elikwi-millennia, kubandakanya nempucuko yakudala. AmaRoma ayithanda kakhulu le litye, njengoko ayekholelwa ukuba yazalwa kumarhe eNyanga aqinisekisiweyo. Bobabini amaRoma namaGrike banxulumana nokubetheka kwenyanga kunye noothixo babo benyanga. Kwimbali yakutshanje. Yathi yathandwa ngexesha lobugcisa be-Art Nouveau. Umphathi wegolide waseFransi uRené Lalique kunye nabanye abaninzi baye benza inani elikhulu lezacholo zokusebenzisa eli litye.
Ilitye lenyanga elimnyama lenkanyezi lenziwe ziintlobo ezimbini zefeldspar, orthoclase ne-albite. Ezi zimbini zezilwanyana zidibanisa. Emva koko, njengoko i-coal mineral cools, i-intergrowth of orthoclase kwaye i-albite ihlukanisa kwi-stacked, i-alternate layers.
I-Adularescence yimibala eluhlaza okwesibhakabhaka ebonisa ubume bekhabochon yolawulo lwenkwenkwezi emnyama yenyanga. Izinto ezimenyezelayo ezibengezelayo zivela kukudibana kokukhanya nongqameko lweekristali ezincinci ze- “albite” kumatye enyanga. Ngelixa ubukhulu boluhlu lwezi kristali zincinci zichonga umgangatho we-blue shimmer. Ke ngoko, mncinci umaleko, kungcono ubaneblue. Oku kuhlala kubonakala njengokukhanya kokukhanya.
Idipozithi yelitye lenyanga yenzeka eArmenia (ikakhulu ukusuka eLake Sevan), nase-Australia, iAustria Alps, Mexico, Madagascar, Myanmar, Norway, Poland, India, Sri Lanka nase United States.
Ngaphaya koko, ilitye lenyanga yiFlorida State Gemstone (i-USA). Yayityunjwe ngoluhlobo ngo-1970 ukukhumbula ukubekwa komhlaba eNyangeni, okwaphuma eKennedy Space Centre. Ngaphandle kokuba lilitye elinqabileyo likaRhulumente waseFlorida, ayenzeki ngokwendalo kurhulumente.
I-Feldspars liqela lamaminerali enza i-tectosilicate yamatye enza malunga neepesenti ezingama-41 zomhlaba womhlaba welizwekazi ngokobunzima.
Inkwenkwezi yelitye elimnyama intsingiselo kunye neepropathi
Ilitye linamandla anamandla okukunceda uqhagamshele kumfazi kaThixo ngexesha lokucamngca. Njengamakristal e-rainbow athandekayo e-moon atyhila kwii-chakras eziphezulu, ezinokukunceda ekuphuhlisweni kwezipho zengqondo. Ukungcangcazela kwabo kuyasebenza ngaphakathi kwe-sacral okanye chakra yenkaba ukunceda ngokuvela kweembono ezintsha kunye neenoveli.
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga phantsi kwemicroscope
Ngaba i-labradorite iyafana nelitye lenyanga elimnyama?
ILabradorite ihlelwa njenge-plagioclase kunye ne-calcium sodium feldspar. I-Moonstone yi-orthoclase kunye ne-potassium sodium feldspar. Kungenxa yoko le nto ilitye lenyanga kunye nelabradorite ngamatye oodade. bakusapho olunye kodwa ngokwendalo bahlukile.
Ngaba ilitye lenyanga elimnyama linqabile?
Kunqabile kakhulu ngenxa yokuba kwenzeka njani kwaye ungabafumana phi. Ilitye lenyanga elimnyama lelona linqabileyo kuwo onke amatye enyanga anjenge-rainbow moonstone kunye nelitye lenyanga elimhlophe.
Wazi njani ukuba inkwenkwezi emnyama yenyanga iyinyani?
I-Adularescence kufanele, iblue. I-sheen kufuneka ibonakale phantsi kokukhanya ngaphezulu kwecabochon, kwaye kufanele ibonakale ngokulula kuluhlu olubanzi lwee-angles zokujonga.
Thenga ilitye lenyanga elimnyama lendalo kwivenkile yethu yegugu
tags ilitye elinqabileyo elibomvu, Nkwenkwezi
tags isafire, Nkwenkwezi